Duudhaaleen waliin jireenya sabootaa ayyaanicharratti lallabamuu qabu
Itoophiyaan biyya seenaan, afaan, aadaafi duudhaan sabootaaf, sablammiileefi ummatashii awwaalamee hiyyummaafi boodatti hafummaan man'ee irratti ijaattatee turte ta'uun yaadannoo yeroo dhiyooti.
Qabsoo hadhaawaa saboonni, sablammoonniifi ummattoonni biyyattii irree tokkoon taasaniin sirnoonni cunqursoon hundeedhaa fonqochamuun bakkasaaniitti sirni duudhaalee, afaan, amantiileefi saboota ija tokkoon ilaalu dhugoomuu erga eegalee as gama hundaan jijjiiramoonni hedduun galmaa'ajiiru.
Saboonni, sablammoonniifi ummattoonni sirna gama hundaan walqixxummaasaanii mirkaneesse kana sanada waliigaltee heera jedhamuun mirkaneeffatanii gaaffii eenyummaa, mirga ofiin ofbulchuu, seenaa, afaan, amantii, aadaafi duudhaa ofii mirkaneeffachuufi gonfachuu danda'aniiru.
Kunis heera Sadaasa 29 bara 1987 ragga'een mirkanaa'eera. Har'a heerichi eddii mirkanaa'ee kunoo waggoonni 23 lakkaa'amaniiru. Waggoota kanneen keessatti injifannoowwan hedduunis galmaa’aniiru.
Bu'uura murtii Manni Maree Federeeshinii Ebla 21 bara 1998 dabarseen guyyaan heerri walqixxummaa sabootaa mirkaneesse itti ragga'e (Sadaasni 29) Guyyaan Saboota, Sablammmootaafi Ummattoota Itoophiya ta'ee wagguma waggaan qophiilee adda addaatiin waa'elchamee kabajamaa jira.
Guyyichaan dahachuun Itoophiyaan biyya saboonni sablammoonniifi ummattoonni jaalalaafi tokkummaan wajjummaan keessa jiraatan itti mirkanaa'e ta'uu yaadachuun kaayyoo ijoo ayyaana sabootaa haala ho’aafi ittifufiinsaan naannolee adda addaatti kabajamaa tureeti.
Ayyaanota baroota darban kabajamanirraa saboonni, sablammoonniifi ummattoonni Itoophiyaa waliigalteen biyya tokkummaa dimokraatawaa taate uumuu, qabeenya waliiniisaaniis cimsachuu ilaalchisee bu’aawwan guguddoon galmaa’uu danda'aniiru.
Waltajjiilee sadarkaa biyyaafi naannoleetti gaggeeffamaniin bu’uurri injfannoowwan galmaa'anii heericha ta'uufi wabiin heerichaa ammoo lammiileedhuma biyyittii ta’uurratti hubannoon akka uumamu taasifamaa tureera.
Injifannoowwan heerichaan argaman dhandhamachaa biyyi keenyaafi ummannishii daandii haaromsaarra imaluun ammas fayyadamummaasaanii caalaatti mirkaneeffachuuf yeroo kamuu caalaa tattaafachuu qabu.
Kabaja ayyaanichaatiin walqabatee nageenyi amansiisaan, bulchiinsi gaariifi hojiiwwan misoomaa adda addaarraatti ummata bal’aa keessumaa dargaggoota bu’aa qabeessa taasisuurratti hojii guddaan waan hafeef ciminaan irratti hojjechuun murteessaadha.
Hojiiwwan kanneen ciminaafi itti fufiinsaan hojjetamnaan mootummaafi ummanni walta'anii sassaabdummaa kiraafi ilaalchasaa laamshessaa misooma hawaas-dinagdee si'aayaa mirkaneessuun carraa egeree biyyattii abdachiisaa gochuun ni danda'ama.
Akkuma warqiin ibiddaan qoramu, sirni kunis yeroowwan adda addaatti rakkoolee bulchiinsa gaarii, maxxantummaa, sassaabdummaa kiraa, malaammaltummaafi olaantummaan seeraa kabajamuu dhabamuutiin qoramaa tureera.
Kanaaf guyyaan sabooti, sablammootiifi ummattooti biyyitti itti walargan qofa osoo hintaane guyyaa bu’aalee misoomaa isaanii walitti gurguratan, tajaajiloota qaban itti beeksifataniifi aadaafi duudhaasaanii obbolaawwan isaanii wajjin waltajjii itti agarsiifatan ta’ees tajaajilaa jira.
Waltajjii kanarratti aadaa ofii agarsiisuun akkuma jirutti ta'ee waa'ee nageenya waaraa, duudhaaleen waljaalalaafi walkabaja sabootaa, sablammootaafi ummatoota Itoophiyaarratti xiyyeeffannaan ergaa dabarsuufi lallabamuu qabu.
Torban kana/This_Week 17536
Guyyaa mara/All_Days 1442316